Service Guide - Shanghai bilitere Co., Ltd
Nga Sale Service
400 ahịa Ọrụ emmepe
Anyị 400 ahịa ọrụ emmepe na-ekewa n'ime ọmụma nkwurịta okwu emmepe, hiwere ka mma ahịa afọ ojuju, ahịa omume analysis emmepe, na ngwaahịa ahịa emmepe, nke na-enye gị na ọrụ ọrụ gụnyere ọrụ ozi ọmụma, price consultations, oru nkwado, ngwaahịa mkpesa, Ndozi na akụkụ ahụ mapụtara ase, na ahịa support.
User Ahụmahụ Day
N'oge ọrụ ahụmahụ ụbọchị na anyị ewepụta oge na n'ụzọ zuru ezu na-ịme ọhụrụ ngwaahịa na-ebu ezi ahịa ahụmahụ na-eme, nyere gị aka ịghọta XCMG mma, na-enye gị onwe ahaziri ewu ngwọta.
Anyị chọrọ na-eme ka ọzụzụ nke pụtara ìhè ụlọ ọrụ ndị ọkachamara, n'ihi ya, anyị na-eji ịnụ ọkụ n'obi na-ewu onye ọrụ ọzụzụ isi, onye nkwado na National eweli Nkà Asọmpi na Concrete Design Asọmpi, na ifịk ifịk na-akwalite imekọ ihe ọnụ na-ewu ụlọ ọrụ.
Private ahaziri Construction Solutions
Anyị nwere software na ngwaike ego nakwa dị ka afọ nke owuwu ahụmahụ dị mkpa iji nye gị oru oma na ukwuu ahaziri ewu ngwọta. Anyị ga-eji obi ụtọ na-ege ntị ọ bụla nke gị ngwaahịa imewe, n'ichepụta, ma ọ bụ ọrụ echiche n'oge alo usoro.
The ina differentiated ewu bụ mgbe niile n'ebe ahụ, anyị egbughị mgbalị ọ bụla na-enyere gị aka iji họrọ nri na ngwá na-aghọta ezigbo uru nke ngwá ị na-azụta.
One-akwụsị Financial Services
Dabere na a miri emi nghọta nke engineering ígwè ngwaahịa na ahịa mkpa, anyị na-arụ ọrụ na isi ego oru inye azụmahịa gị na nke kacha mma ego ngwọta.
Iji izute gị ọ bụla mkpa, anyị na-enye a ọkachamara njem nnyefe ọrụ na a ọzụzụ ọrụ n'ihi na mbụ echichi na bụla ibe nke ígwè.
365 × 24 Year-gburugburu Service
gazuo uwa niile, anyị nwere ihe karịrị 5000 ọrụ injinia na 1500 ozi a raara nye ugbo ala. Anyị na-kwara na afọ-gburugburu 24-hour ọrụ ọbụna n'oge ememe, na akara na anyị iwu nke mgbe nile na-enye "a nzaghachi n'ime minit 15 na ọrụ ẹkụre n'ime 24 awa."
Anyị ike a zuru okè GPS Global Service Center, na anyị nwere ike inye gị na a proactive smart odibo usoro site na Internet Ihe n'elu ikpo okwu.
Mapụtara Parts Mgbe Ị Mkpa
Anyị nwere ọtụtụ puku akụkụ ahụ mapụtara hiwere isi gafee ise, na ngwaahịa fọrọ nke nta 1 ijeri ọkachamara akụkụ ahụ mapụtara. Anyị na-ekwe nkwa na akụkụ ahụ mapụtara ga-anapụta awa 72.
Mgbe-ahịa Inwe nchegbu-free Service
Anyị bụ ndị kwara inye mgbe-ahịa ọrụ, gụnyere ebiri, abụọ n'aka ụgbọala nwete, ahia-ins, overhauls, na imegharị ihe maka iji. Anyị na-arapara anyị ọrụ na ozi nke na-ejizi gị nsogbu n'obi dị ka ihe kasị mma anyị nwere ike.
VIP Ahịa Club
Anyị nwere a "ahịa-ọkachamara-factory-ewu" anọ ụzọ imekọ ihe ọnụ na mgbanwe n'elu ikpo okwu, na a ụda management usoro na usoro ọrụ.